Sawirro: Dowladda oo dib u howlgalisay Shabakadda Hindisaha Daahfurnaanta Dowladda – Kismaayo24 News Agency
Sawirro: Dowladda oo dib u howlgalisay Shabakadda Hindisaha Daahfurnaanta Dowladda
by admin 22nd May 2018 019
Dib u Howlgalinta Shabakadda Hindisaha Daahfurnaanta Dowladda OGI (Open Government Initiative) ayaa ah mid lagu so bandhigayo xogta shaqo iyo waxqabadka wasaaradaha dowladda,kaasi oo loogu talagalay in bulshada loo soo bandhigo,sida waxqabadka qaab dhismeedka sharciyada Shaqalaha, Mashaariicda iyo Macluumaadyo kale oo ay bulshada u hayaan hay’adaha dowladda.
Ujeedada barnaamijka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya ayaa la xiriirta islaxisaabtanka shacabka iyo hay’adaha dowladda,si loo abuuro jawi wadashaqeeneed ee dhexmara labada dhinac.
Agaasimaha Guud Wasaradda Warfaafinta C/raxmaan Sheekh Yuusuf Al-cadaala ayaa sharaxay Ahmiyadda dib u howlgalinta shabakadan Hindisaha Dahfurnaanta Dowladda OGI ,iyadoo ay ka qeybgaleeen wasiirro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya iyo madax kala duwan oo ka kala socoday wasaaradaha iyo qeybaha bulshada.
“Marka koowaad barnaamijka waxaa loo baahday markii la dersay baahiyaha loo qabo in uu jiro farqi u dhexeeya dowladda iyo shacabka,taasi oo ku saabsan in shacabku ay ogaadaan waxyaabaha ay dowladooda u hayso waa taasi barnaamijkan ahmiyadiisa”. Ayuu yiri Agaasime Cadaala.
Siihayaha Wasiirka warfaafinta ahna Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Xildhibaan C/raxmaan Iidaan Yoonis oo si rasmi ah u daah-furay shabakaddan ayaa sheegay in lagu so bandhigi doono waxqabadka dowladda.
“Waxaa lagu soo bandhigi doonaan xogaha kala duwan sida siyaasadda,amniga dhaqaalaah,Miisaaniyadda Sharciyada,si ay halkaasi ugala socdaan macluumaadyada hay’adaha dowladda,Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay abuuraysaa jawi isla xisaabtan dowladda iyo Shacabka ah’. Ayuu yiri Wasiir Iidaan.
C/llaahi Xaamud Maxamed Wasiiru dowlaha Xafiiska Raiisul Wasaaraha ayaa tilmaamay muhiimadda laga leeyahay arrintan oo ay hirgelisay Xukuumadda Soomaaliya.
“Hadii shacabka aanay waxba ka ogayn wixii dowladdu ay u qabanaysa,ama ay qabanayso wasaaradda diinta, Beeraha ama Gargaarka iyo wasaaradaha kale, marka hadii qofku aan waxba la socon wax fikrad ah ka ma haysan karo, aduunyada dhan ayaya ka jirtaa”. Ayuu yiri Wasiiru Dowlaha Xafiisa R/wasaaraha Xaamud.
Wasiirka Shaqada iyo arrimaha bulshada Xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa faah faahiyay shaqooyinka muhiimka ah oo ay dowladda u hayso shacabka.
“Xili oo muhiim ah oo xasaasi ah ayaan ku guda jirnaa xagga guud ahaan hanaanka geedi socoda dowladnimo,waxaa ay dowladda Soomaaliya ay haysaa howlo muhiim u ah dalka oo masiiri ah,waxaana kamid ah howlahaasi dib u eegista iyo dhameystirka Dastuurka”. Ayuu yiri Wasiir Saalax.
Qorshahan Shanakadda OGI ayaa qeyb ka ah dadaallo dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku abuurto jawi wadashqeyneed iyo isla xisaabtan dhexmara hay’adaha Dowladda iyo shacabka ay u adeegayaan.
Guddoomiye Eng. Yarisow ayaa sheegay in khasaare gaaraya $35 Million oo dollar uu geysteeen Roobabkii mahiigaanka ee ka da’ay Muqdisho
Akhriso: Maamulka Puntland oo Awaamiir kusoo rogtay Gaadiidka Isaga kala goosha Magaallooyinka Garoowe iyo Laas-caanood.
Sawirro: Wasiir maryan qaasim iyo wafdi ka socda dowladda qadar oo maanta gaaray magaalada….
Tifaftiraha K24 9th April 2017
WARBIXIN: Baarlamanka Jubbaland Oo Fadhigoodii 16aad Kaga Doodey Arimo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan………………………….(Warbixintan Oo Faahfaahsan Muqaal-na Wadata Ayaan Idin Wadnaa)
Tifaftiraha K24 2nd September 2016
TOP NEWS: Akhriso Qasaaraha ka dhashay Weerarkii Hotel Ambassador oo weli socda+ Sawirro Hor dhac ah oo aan ka helnay
Tifaftiraha K24 1st June 2016